XudurTuulooyin Howlgallo Tuulooyin loogala wareegay Al Shabaab oo laga sameeyay Xudur lagala wareegay Xudur – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xudur ( Sh. M. Network)-Guddoomiyaha Maamulka degmada Xudur ee Gobolka Bakool Maxamed Macallin Axmed oo la hadlay Idaacadda Shabelle ee Magaalada Muqdisho ayaa waxa uu guulo ka sheegtay howlgallo ka dhan ahaa Xarakada Al Shabaab.
Howlgalladaas ayaa saacadihii la soo dhaafay Ciidamada dowladda Federaalka iyo kuwa AMISOM waxa ay ka sameeyeen Tuulooyin hoostaga degmada Xudur kuwaas oo ay ku sugnayeen Dagaalamayaasha Xarakada Al Shabaab.
Isagoo hadalkiisa sii wata Guddoomiyaha maamulka degmada Xudur Maxamed Macallin ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in howlgalladooda ay kula wareegeen illaa 6 tuulo sida uu hadalka u dhigay.
Mid ka mid ah Tuulooyinkaas ayuu guddoomiyuhu carabka ku dhuftay in dagaal uu ku qabsaday islamarkaana ay khasaaro ku gaarsiiyeen Al Shabaab isagoo iska fogeeyay dhankooda in uu jiro khasaaro ka soo gaaray dagaalkaas.
“ Dhimashadooda 1 ayaan aragnay 5 kalana dhaawac ayaa ka soo gaaray dagaalka ay nala galeen Al Shabaab” ayuu yiri guddoomiyaha maamulka degmada Xudur ee Gobolka Bakool Maxamed Macallin.
Ugu dambeyn waxa uu guddoomiyuhu wacad ku maray in ay sii socon doonaan howlgallada ka dhanka ah Al Shabaab ee Ciidamada dowladda Federaalka iyo kuwa AMISOM ay ka wadaan Tuulooyinka hoostaga degmada Xudur.
DEG DEG:Ciidanka Sirdoonka Soomaaliya oo sheegay in la dilay Madaxii amniyaadka Al Shabab